Mpanamboatra sy mpamatsy efitrano mangatsiaka any Sina. Xinneng
Ny efitrano mangatsiaka dia omen'ny mpanjifa ny halavany, ny sakany, ny haavony ary ny mari-pana ilaina. Hanoro hevitra ny hatevin'ny tontonana mangatsiaka mifanaraka amin'izany izahay araka ny hafanan'ny fampiasana. Ny efitrano mangatsiaka amin'ny mari-pana avo sy antonony amin'ny ankapobeny dia mampiasa takelaka matevina 10 cm, ary fitehirizana hafanana ambany sy fitehirizana hatsiaka mazàna dia mampiasa takelaka matevina 12 sm na 15cm. Ny hatevin'ny takelaka vy an'ny mpanamboatra dia mazàna ambonin'ny 0.4MM, ary ny hakitroky ny vongan-trano mangatsiaka dia 38KG ~ 40KG / metatra toratelo isaky ny metatra toratelo araka ny fenitra nasionaly.
Ny efitrano mangatsiaka dia omen'ny mpanjifa ny halavany, ny sakany, ny haavony ary ny mari-pana ilaina. Hanoro hevitra ny hatevin'ny tontonana mangatsiaka mifanaraka amin'izany izahay araka ny hafanan'ny fampiasana. Ny efitrano mangatsiaka amin'ny mari-pana avo sy antonony amin'ny ankapobeny dia mampiasa takelaka matevina 10 cm, ary fitehirizana hafanana ambany sy fitehirizana hatsiaka mazàna dia mampiasa takelaka matevina 12 sm na 15cm. Ny hatevin'ny takelaka vy an'ny mpanamboatra dia mazàna ambonin'ny 0.4MM, ary ny hakitroky ny vongan-trano mangatsiaka dia 38KG ~ 40KG / metatra toratelo isaky ny metatra toratelo araka ny fenitra nasionaly. Ny orinasa dia hanao varavarana amin'ny habe samihafa arakaraka ny filan'ny mpanjifa, mazàna ny haben'ny varavarana mahazatra dia 0.8m * 1.8m. Raha tsy manana ny habeny irina ny mpanjifa, dia hanana habe efitrano mangatsiaka mahazatra ihany koa izahay hisafidianan'ny mpanjifa.
Ny tontonana mangatsiaka polyurethane dia mampiasa polyurethane maivana ho fitaovana anatiny amin'ny tontolon'ny efitrano mangatsiaka. Ny tombony amin'ny polyurethane dia ny fahombiazan'ny insulation heat dia tena tsara. Ny ivelany ny tontolon'ny efitrano mangatsiaka polyurethane dia vita amin'ny SII, takelaka vy vita amin'ny vy ary vilia vy tsy misy fangarony. Ny tombony azo amin'izany dia ny fisorohana ny fielezan'ny hafanana. efitra tontonana noho ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny atiny sy ivelany, ka mahatonga ny efitrano mangatsiaka hitahiry angovo bebe kokoa sy hanatsara ny fahombiazan'ny efitrano mangatsiaka.
Endri-javatra ny Panel Polyurethane Cold Room
1. Ny polyurethane henjana dia manana fifehezana hafanana ambany sy fahombiazan'ny hafanana tsara.
2. Polyurethane henjana dia porofo mando sy tantera-drano.
3. Afo polyurethane hentitra, mijanona amin'ny lelafo, mahazaka hafanana ambony.
4. Noho ny fahombiazan'ny insulation thermal polyurethane panels dia afaka mampihena ny hatevin'ny valopy fananganana trano izy io ary mampitombo ny atin'ny trano.
5. fanoherana mafy ny deformation, tsy mora triatra, maharitra sy azo antoka famaranana.
6. Ny fitaovana polyurethane dia manana firafitra porosity miorina ary amin'ny ankapobeny dia sela mikatona izy io, izay tsy vitan'ny fanamafisam-peo faran'izay tsara, fa misy koa fanoherana mahery vaika ary fanamafisam-peo ..
7. Fahombiazan'ny vidiny feno
Ny famaritana ny hatevin'ny tontonana mangatsiaka polyurethane dia: 75.100.120.150.180, 200MM ho an'ny fifantenana. Ny fitaovam-piarovana lehibe dia: takelaka aliminioma ambongadiny, takelaka vy tsy misy fangarony, takelaka vy zinc miloko, takelaka vy masira, ary takelaka mahazatra. Matetika izahay no mampiasa takelaka alimina vita amin'ny vy sy vy tsy misy fangarony.
Fampahalalana momba ny tetik'asa ho an'ny frizera:
halavan'ny sakany hahavony CBM hafanana Quantity
Ny hatevin'ny tontonana
Sarona vy vita amin'ny vy
Volon-koditra, vy tsy misy fangarony, nandrisika (namboarina)
Hatevin'ny fonosana vy vita amin'ny vy
Insulated pu sandwich panel miaraka amin'ny cam-lock
Teo aloha: Super Silent Diesel Generator - Silent Type Generator - Xinneng
Manaraka: Toeram-pitrandrahana Monoblock mitaingina tampon-trano
Fitaovana fampangatsiahana efitrano mangatsiaka
Fitaovana mangatsiaka amin'ny efitrano mangatsiaka
Fitaovana fampangatsiahana ao amin'ny efitrano mangatsiaka
Fivarotana efitrano mangatsiaka